Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.2.4 ịkpafu
Population nwayọọ, ojiji nwayọọ, na usoro nwayọọ eme ka ya ike iji nnukwu data isi iyi na-amụ ogologo oge na ọnọdụ.
Otu nke oké uru nke ọtụtụ nnukwu data isi mmalite ndị na ha na-anakọta data karịrị oge. Social ọkà mmụta sayensị na-akpọ nke a ụdị n'elu-oge data, longitudinal data. Na, ndammana, longitudinal data ndị dị oké mkpa maka ịmụ mgbanwe. Iji reliably tụọ mgbanwe, Otú ọ dị, mmesho usoro onwe ya ga-abụ n'ụlọ anụ. Na okwu nile nke ọkà ná mmekọrịta Otis Dudley Duncan, "ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịlele mgbanwe, anaghị agbanwe ihe ọtụtụ" (Fischer 2011) .
O di nwute na, ọtụtụ nnukwu data na usoro-karịsịa azụmahịa usoro na ike ga-eweghara digital metụtara-na-agbanwe agbanwe mgbe nile, a usoro na Aga m akpọ nwayọọ. Karịsịa, ndị a na usoro agbanwe na ụzọ atọ bụ isi: bi nwayọọ (mgbanwe ndị a na-eji ha), akparamàgwà nwayọọ (mgbanwe otú ndị mmadụ na-eji ha), na usoro nwayọọ (mgbanwe usoro onwe ya). The atọ na isi mmalite nke nwayọọ pụtara na ihe ọ bụla ụkpụrụ na dijitalụ Chọpụta data nwere ike mere site dị mkpa mgbanwe na ụwa, ma ọ bụ o nwere ike e mere site nudi nke nwayọọ.
The mbụ isi iyi nke nwayọọ-bi nwayọọ-na-na-na-eji usoro, nke a na-agbanwe on ogologo oge akpịrịkpa na obere oge akpịrịkpa. Dị ka ihe atụ, si 2008 na-ewetara nkezi afọ ndụ ndị mmadụ na-elekọta mmadụ media amụbawo. Tụkwasị na nke a ogologo oge na ọnọdụ, ndị na-eji a usoro mgbe ọ bụla dịgasị. Dị ka ihe atụ, n'oge US president ntuli aka nke 2012 nkezi nke tweet banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị e dere site inyom fluctuated site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị (Diaz et al. 2016) . N'ihi ya, ihe nwere ike iyi ndị na-na a gbanwee ọnọdụ nke Twitter-amaokwu nwere ike n'ezie ịbụ nnọọ mgbanwe onye na-ekwu okwu n'oge ọ bụla.
Na mgbakwunye na mgbanwe onye na-eji a usoro, e nwekwara agbanwe na otú usoro na-eji. Dị ka ihe atụ, n'oge na-ogide Gezi Park ngagharị iwe na Istanbul, Turkey ke 2013 protesters gbanwere ha na-eme hashtags dị ka mkpesa, ghọrọ usoro. Nke a bụ otú Zeynep Tufekci (2014) kwuru na ndị nwayọọ, nke o nwee ike ịchọpụta n'ihi na ọ nọ na-edebe ihe omume on Twitter na n'elu ala:
"Gịnị mere di na ozugbo ndị mkpesa ghọrọ ọchịchị kasị akụkọ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ. . . yipụrụ ahụ hashtags ma e wezụga ịdọrọ uche gaa a ọhụrụ onu. . .. Ezie na ngagharị iwe gara n'ihu, na ọbụna kara njọ, ndị hashtags nwụrụ ala. Ajụjụ Ọnụ kpughere abụọ mere nke a. Mbụ, mgbe ọ bụla maara na isiokwu, na hashtag bụ ozugbo n'ekpere na kemmefu on uma-ejedebeghị Twitter n'elu ikpo okwu. Nke abụọ, hashtags hụrụ naanị dị ka bara uru n'ihi na adọta uche n'otu isiokwu, ọ bụghị n'ihi na ekwu okwu banyere ya. "
Nke atọ ụdị nwayọọ bụ usoro nwayọọ. Na nke a, ọ bụghị ndị na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ àgwà ha agbanwe agbanwe, ma usoro onwe ya na-agbanwe agbanwe. Dị ka ihe atụ, ihe karịrị oge Facebook mụbara ịgba na ogologo nke mmelite ọkwa. N'ihi ya, ihe ọ bụla longitudinal amụ mmelite ọkwa ga-enweghị ka arịa dị iche iche ihe a kpatara mgbanwe. System nwayọọ nwere njikọ chiri anya nsogbu akpọ algorithmic etinye nke anyị na-now atụgharị.